Afrika, 12 May 2019
Xisbiga ANC oo ku horreeya doorashada Koonfur Afrika
Kenya oo wax ka beddeleysa xeerka qaxootiga
Baarlamaanka dalka Kenya ayaa wax ka bdedel ku samaynaya xeerka qoxootiga dalkaasi ku sugan iyo kuwa soo galaya.
ONLF oo ka hadashay Gaas laga helay gobolka Soomaalida
Dowladda Ethiopia ayaa shaacisay in deegaanka Soomaalida laga helay keyd Gaaska Dabiiciga ah oo gaaraya 1.6 Trillion Cubic Feet.
Xiisad siyaasadeed oo ka taagan Gaarisa
Magaalooyinka Nairobi iyo Gaarisa waxaa ka dhacaya kulamo is khilaafasan oo ay yeelanayaan siyaasiyiinta gobalka Soomaalida Kenya, kuwaas oo looga hadlayo maamulka Gaarisa.
Ehtiopia: Somalida oo la Soo Noqday Degmooyin Horey Cafarta Loogu Daray
Kumanaan kun oo qof ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay socod dibad bax ah ku mareen jidadka magaalada Dire Dawa (Dirdhabe) iyo dhowr magaalo oo kale oo hoos yimaada gobolka City ee dalka Ethiopia.
ONLF oo Wada-hadal ugu baaqday Soomaalida iyo Cafarta
Ururka ONLF ayaa ugu baaqay Soomaalida iyo Qowmiyadda Cafarta inay ka wada hadlaan qaboojinta xiisad colaadeed oo la sheegay inay ka jirto degaannada xuduudda labada maamul ee dalka Itoobiya.
Dagaal culus oo xalay ka holcay Tripoli
Dagaal culus ayaa xalay ka holcay magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Libya, ayada oo midna dhinacyada dagaalamaya uusan xaqiijin inuu qabsaday furimo hor leh.
Duqeymo Xagga Cirka ah oo ka Dhacay Puntland
Duqeymo dhinaca cirka ah ayaa la soo sheegayaa in ay ka dhaceen deegaanka Cameyra ee degmada Iskushuban ee gobola Bari, halkaasoo la rumeysan yahay inay ku sugnaayeen kooxo katirsan ururda Daacish iyo Al-shabab oo dhowrkii bilood ee la soo dhaafay uu dagaal ku dhex marayey dhulka buuraleyda ah.
Militariga Sudan iyo bannaanbaxayaasha oo isku soo dhawaaday
Muddaaharadyaasha Sudan iyo hoggaanka kumeel gaarka ah ee milatariga dalkaas ayaa u muuqda in ay isku soo dhawaadeen ka dib banaanbaxyadii waaweynaa ee shaley.
Hal Milyan oo Qof oo Dibad-bax ka Sameynaya Sudan
Dibad-baxayaasha Sudan ayaa billaabay in ay isu soo aruuraan iyaga oo doonaya in ay ka dhabeeyaan ballan qaadkoodii ahaa in ay Khamiista maanta ah sameynayaan bannaanbax ay ka qeyb-gali doonaan "Hal Milyan oo qof.''
M/Afrika oo dalbaday in maamul rayid ah laga her-galiyo Sudan
Qaar ka tirsan hoggaamiyayaasha Midowga Afrika oo ku shiray magaalada Qaahira ayaa saddex bilood ugu daray Golaha Milatariga Ku Meelgaarka ah ee dalka Suudaan inay xukunka ku wareejiyaan maamul rayid ah.
Malawi oo noqdey dalkii ugu horreeyay ee isticmaala talaalka duumada
Ururka Caafimaadka Aduunka ee WHO ayaa sheegay in dalka Malawi uu noqday waddankii ugu horeeyay ee billaaba in caruurta uu ka talaalo xanuunka duumada, isagoo adeegsanaya talaal cusub oo xanuunkan ay kaneecadu faafiso looga hortagayo.